ဗီယက်နမ် ခရီးစဉ် ( ၃ ညအိပ် / ၄ ရက် ) - VIETNAM TRIP (3N /4D ) | Amber Land
ပထမနေ့ ။ ။ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှထွက်ခွာပြီး ဗီယက်နမ်မြိုနိုင်ငံ မြို့တော် ဟနွိုင်းလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိ
မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဒေသခံ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဧည့်လမ်းညွှန်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်သို့ သွားရောက်တည်းခို
မည်ဖြစ်ပါသည်။ ( ညစာ )
ဒုတိယနေ့။ ။ နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟာလောင်းဘေသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းတစ်
လျှောက်တွင် တစ်မျှော်တစ်ခေါ် လယ်ကွင်းကြီးများကိုလည်း ရှုမြင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့လည်ပိုင်း 11 နာရီဝန်းကျင်ခန့်
တွင် ဟာလောင်းဘေသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သဘောင်္ပေါ်တွင် Check In ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာကို သဘောင်္ပေါ်တွင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံပြီး အပျော်စီးသဘောင်္ခရီးစဉ်ကို စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်တွင် လှပသော
သဘောင်္များ ရွက်လွှင့်နေကြမည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ရုံမက ရှုမငြီးဖွယ် တောင်စဉ်တောင်တန်းအလှအပများကိုလည်း ခံစားနိုင်မည်
ဖြစ်သည်။ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဒေသခံရိုးရာတစ်ခုဖြစ်သော တံငါရွာလေးသို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ ညနေပိုင်း
တွင် နေဝင်ဆည်းဆာအလှကို သဘောင်္ပေါ်မှ ခံစားကြမည်ဖြစ်ပြီး ညပိုင်းတွင် စီးနင်းရာ သဘောင်္ပေါ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ( နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ )
တတိယနေ့။ ။ နံနက်စာကို သဘောင်္ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် နံနက်9နာရီခွဲခန့်တွင် သဘောင်္ပေါ်မှ Check Out ထွက်ပြီး မြို့တော် ဟနွိုင်းသို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်သို့ရောက်လျှင် Hoan Kiem Lake, Ngoc Son Temple, Te Huc bridge, Ly Thai To moutment, နှင့် နာမည်ကျော် ဗီယက်နမ်ရိုးရာ ရုပ်သေးအကအလှကိုလည်း ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ညပိုင်းတွင် အပန်းဖြေ ညဈေးသို့လည်ပတ်၍ ရိုးရာ စားသောက်ဆိုင်တွင် ညစာကို သုံးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
( နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညစာ )
စတုတ္ထနေ့ ။ ။ ဟိုတယ်နံနက်စာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော် သမိုင်းဝင် Ba Dinh Square ကိုလည်း သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး သမ္မတဟောင်း ဟိုချီမင်း၏ ဂူဗိဗ္မာန်ကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်အလေးပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် 11 ရာစုကတည်းက ဘုရင်မင်းမြတ် Ly Thai Tong တည်ထားသော တစ်ပင်တိုင်စေတီသို့လည်း သွားရောက်ဖူးမြော်
အုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။နေ့လည်စာကို ဒေသစားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပီးညနေပိုင်းတွင်ဟနွိုင်းလေဆိပ်သို့ စတင်ထွက်ခွာပီး မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ( နံနက်စာ / နေ့လည်စာ )
ဤတွင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးစဉ်လေး ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်။
Arrive at Noi Bai International Airport, meet your driver and Guide driver for an airport transfer. Overnight at hotel in HaNoi
DAY3: HALONG - Hanoi (bREAKFAST/BRUNCH/DINNER)
In the morning, refresh your body and mind withaTai Chi exercise on the sundeck at the break of dawn. Have tea and coffee onboard and continue exploring Ha Long Bay sailing across its 2000 islets and visiting some of its major highlights. Normally, check out at 09:30, haveabuffet brunch while cruising back to shore. Disembark at 11:00 AM to transfer to Hanoi capital. Drive back with your driver and Guide to HaNoi .
Then : Walking and discovery the : Hoan Kiem Lake , Ngoc Son temple . Te Huc brigde , Ly Thai To moutment. Enjoy the famous Vietnamese traditional art – Water puppetry Show. Free time shopping tour the Hanoi Old Quarter , Night Market (Friday to Sunday) .Dinner at local restaurant .Overnight at Hotel in Hanoi.
DAY4: Hanoi departure (bREAKFAST/LUNCH)
Drive to the historic complex of Ba Dinh, visit Ba Dinh Square, where The Late President Ho Chi Minh declared Vietnams Independence on2September 1945, HoChiMinh Complex : Ho Chi Minh’s Mausoleum and continue to the One Pillar Pagoda, the must-see monument in Hanoi – It is an ancient Buddhist pagoda, built in the early 11th century in the reign of King Ly Thai Tong, all construction supported by only one pillar, resemblingaBuddhist lotus , Tran Quoc Pagoda . Lunch at local restaurant . Free time for shopping or discovery the daily life of The Local people . Transfer with your driver and Guide to Hanoi/ Noi Bai International Airport and take flight to Sweet home . End Tour